Abavelisi bePV KwiChina Izinto ezongezwayo zePVC abaXhasi kunye neFektri
I-Polyethylene eneklorin yohlobo lweyunithi yerabha yento yohlobo lweCM 5513 CM 1354 CM 6360 CM 8360 CM 6605 CM 1360 CM 135B CM 2354 CM 3354 CM 5633 CM 135B-L CM 140B yeChlorine Content% 35 ± 1 35 ± 1 36 ± 1 36 ± 1 36 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 35 ± 1 40 ± 1 Ubushushu beFusion J / g -1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 .01.0 Unxweme oluqinileyo A ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 Tensile Strength Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 -8.0 ≥8.0 ...
I-1 Intshayelelo ngesihlunu seemolekyuli esongezwe kuhlobo olutsha lwe-PVC somelele sinomsebenzi ongcono we-adsorption, kwaye sinokuphucula ubumhlophe beemveliso ze-PVC, isithintelo sokususwa kwe-HCl kwiimveliso ze-PVC kwaye sine-adsorption eyomeleleyo kakhulu ye-HCL, ukuze ikwazi ukubamba i-catalysis kunye ukuthotywa kwePVC, kwaye kunefuthe lokunciphisa idosi ye-stabilizer, ukuphucula ukusebenza kwenkqubo, ukumelana nemozulu, uzinzo, kunye nokunciphisa iindleko kunye nezinye iziphumo. 2.Izibonelelo Ukukhuthaza ukubekwa kweplastikhi, imp ...
Intshayelelo Lubricating Acrylic Processing Aid ine-lubricating function eyodwa, ukufaka kuzo zonke iimveliso ze-PVC, ezinje ngephepha, iifilimu, iibhotile, iprofayili, umbhobho, ifayipi efanelekileyo, inaliti yokubumba kunye nebhodi egwebu. Iindidi eziphambili ze-LP175, LP175A, LP175C, LPn175 Technical Specification Item Unit Specification Appeance - White Powder Sieve Residue (30mesh)% ≤2 Volatile Content% ≤1.2 Intrinsic Viscosity (η) - 0.5-1.5 Ubuninzi obubonakalayo g / ml 0.35-0.55 ifom yePV ...
Intshayelelo TR869 yi-styrene acrylonitrile copolymer, le AS resin enobunzima be-molekyuli ephezulu kakhulu, ubunzima bayo be-molekyuli bungaphezulu kwezigidi ezi-5 Kukuqhubekeka koncedo lwe-ABS, ASA, ABS / PC alloys. Ingasetyenziselwa iimveliso zePVC ezinesicelo esikhethekileyo sokumelana nobushushu. Yimpuphu emhlophe, ayinakunyibilika emanzini, utywala, kodwa inokunyibilika ngokulula kwi-acetone, chloroform. Isalathiso sezempilo sihambelana ne-GB ...
Intshayelelo Olu hlobo loNcedo lwe-Acrylic yoNcedo lweeMveliso ezingabonakaliyo yi-100% ye-acrylic ester processing aid esetyenziswa kwiimveliso zeplastiki ezibonakalayo. Uhlobo oluphambili i-TM401, i-LP20A yezoBuchwephesha boBuchwephesha beNqaku leNkcazo yokuCaciswa kweNkunkuma- Intsalela emhlophe yePowder (30mesh)% ≤2 Umxholo oVuthayo% ≤1.2 I-Viscosity ye-Intrinsic (η) - 2.7-3.2 Ukuxinana okubonakalayo g / ml 0.35-0.55 Iimpawu zokuphucula ukuhla kwePVC . Ukuphucula amandla okuhamba kwe-melt. Ukuphucula kakhulu ...
Intshayelelo yoLungiso lwe-Acrylic yoNcedo lweeMveliso eziPhuphumayo ze-PVC luphandwe sithi, nge-polymer ephezulu yesisindo se-molekyuli enobume obuninzi, obenziwe nge-acrylic monomer ngokusebenzisa i-multistage emulsion polymerization, isetyenziswa ngokubanzi njengoncedo lokuqhubekeka kokukhupha ulwelo olusezantsi Iimveliso zePVC. Iindidi eziphambili ze-LP530, LP531, LPN530, LP530P, LP800, LP90 Item Unit LP530 LP531 LPN530 LP530P LP800 LP90 Inkangeleko - I-White Powder Sieve Resi ...
Intshayelelo Olu ncedo lokulungisa i-acrylic kwimveliso ye-PVC ye-extrusion edityaniswe ne-acrylic polymer kunye nezinto zokusebenza ze-organic kunye nezinto zokwenza izinto ezingekhoyo, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiProfayili yemilo engaqhelekanga ye-PVC, iityhubhu, iphepha kunye nebhodi. Uhlobo oluphambili lwe-LP125 seires LP125T, LP125 Item Unit Specification Appeance - White Powder Sieve Residue (30mesh)% ≤2 Content Volatile% ≤1.2 Intrinsic Viscosity - 5.0-8.0 Apparent Density g / ml 0.35-0.65 Main Types of LP401 series ...
Intshayelelo Uhlobo lwe-Acrylic Processing Aids, yenziwa nge-acrylic ester monomer nge-multi-step emulsion polymerization, luhlobo lwe-molecular polymer yesisindo esine-multistory structure, efanelekileyo ukuvelisa i-PVC yokubumba. Iindidi eziphambili zoluhlu lwe-LP21: LP21, LP21B Item Unit LP21 LP21B Inkangeleko - Intsalela emhlophe yePowder Sieve (30mesh)% ≤2 Umxholo oVuthayo% ≤1.2 Iniscinsic Viscosity (η) - 8.0-9.0 7.0-8.0 Ubungqingqwa obubonakalayo g / ml 0.40-0.55 LP ...
Intshayelelo uthotho lwemveliso ye-AIM ziindidi ezintsha zegobolondo ye-acrylic copolymers, iqondo lobushushu lobushushu kwiglasi yongqameko yi -50 ℃ ~ -30 ℃, uthotho lwesitshintshi sempembelelo aluchaphazeli ukusebenza okulungisiweyo kuphela kodwa nokusebenza kakuhle kokusebenza, kunokuphucula intsebenzo eguqulweyo eguqulweyo kunye nomphezulu ocwebezelayo weemveliso ezigqityiweyo, kwaye unika ukumelana kwemozulu ngokugqibeleleyo kunye neepropathi zokumelana nokuguga, ngokukodwa kufanelekile kwiimveliso zangaphandle, ezisetyenziswa ngokubanzi kwi-nondeformab ...
1.Intshayelelo Uhlobo olutsha lwe-calcium calcium zinc isimilizer sidityaniswa yitekhnoloji ekhethekileyo ene-calcium, zinc, i-lubricant, i-antioxidant kunye ne-arhente yokukhohlisa njengeyona nto iphambili, engenakho ukubuyisela indawo ye-cadmium itywina, kodwa ikwazi ukubuyisela i-tin ye-organic kunye nezinye izinto ezizinzileyo, kwaye zinokuzinza okuhle kwe-thermal, ukugcinwa kwakhona kwemozulu, ukudodobalisa ilangatye, ukuzinza kokukhanya kunye nokungafihli kunye namandla ombala. Ukuziqhelanisa kubonise ukuba kwiimveliso zePVC, uzinzo olushushu lunokutshintsha indawo ekhokelayo ...
Intshayelelo emfutshane I-polyethylene eneklorin (CPE) yinto ephezulu ye-molecular polymer eyenziwe kwi-HDPE ngokusebenzisa i-chlorine ngendlela yesigaba samanzi, kunye nolwakhiwo olukhethekileyo lweemolekyuli eziphezulu ukunika iimveliso zepropathi ebonakalayo kunye neekhemikhali. Iimveliso Series Ngokutsho izicelo CPE, siyahlulahlule sibe ngamaqela amabini: CPE kunye CM, kwaye ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, kwiqela ngalinye thina liphuhlise iintlobo ezininzi kunye nezalathiso ezahlukeneyo zobugcisa. Umsebenzi wentsebenzo yeemveliso zeplastiki eziqhelekileyo ...
I-polyethylene eneklorin yeMveliso yeMagnetic Type Type CPE3615G CM2500A CM2500B CPE230A CPE230B Umxholo weChlorine% 36 ± 2 25 ± 2 25 ± 2 30 ± 2 30 ± 2 Ubushushu beFusion J / g ≤5.0 ≤10.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 Ukuqina kobukrakra A ≤60 ≤80 ≤80 ≤70 ≤67 Tensile Strength Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 Ukudibanisa kwi-Break% ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800 Umxholo oMdaka% ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 I-Mooney Viscosity ML125 ℃ 1 + 4 80-90 76-82 64-70 80-90 60-70 Qaphela: Nceda uqinisekise nathi ...